अमेरिकन आइडलको १८ औॅ संस्करण भर्खर मात्र सकियो । यो हाम्रो लागि यति महत्वपूर्ण थियो की यसमा पहिलो पल्ट नेपाली ठिटो दिवेश पोख्रेलले भाग लिएका थिए र सबै खुडकिलो पार गर्दै बिश्वलाई नै नयॉ सन्देश दिएका थिए ।उनका प्रत्येक प्रस्तुतिहरू आफ्नै तरिकाका हुन्थे र प्रत्येक प्रस्तुतिले निर्णयकको मन पनि जितिरहेका हुन्थे । यो हामी सबैको लागी गौरवको बिषय नै थियो । बिश्वभर छरिएका नेपालीको मात्र नभएर धेरै बिदेशीहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र उनि नै बन्न सफल भएका थिए । उनी भित्र भएको अदभुत कला, गीत गाउने नयॉ तरिका, प्रस्तुति भिन्न शैलि निक्कै उत्कृष्ट र फरक थियो । त्यति मात्र नभएर हरेक पल्ट उनले नेपाललाई बिश्वभर चिनाउन केही न केही बोलिरहेका, गरिरहेका र देखाई रहेका हुन्थे । यो नै उनको जन्मभूमी प्रतिको माया, ममता र सद्भाव थियो । उनले प्रस्तुत गर्ने उनका बालापनका कुरा, नेपालको प्राकृतिक र सॉस्कृतिक सम्पदा लगायत हरेक कुराहरू गौरव गर्न लायक तरिकाले उनले प्रस्तुत गरिरहेका थिए । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिया मन्चबाट नेपालको सन्दर्भमा दिवेशले दिने हरेक अभिब्यक्ति आफैमा महत्वपूर्ण थिए । उनले गरेका हरेक कुराहरूले नेपाललाई बिश्वमाझ चिनाउन ठूलै सहयोग गरेका थियो ।
यति मात्र नभएर अन्तिम दिनको प्रस्तुतिमा निर्णयक मध्ये एकले काठमाडौबाट यस्ता प्रतिभा यस्ता प्रतियोगितामा ल्याउन र आउन हौसाएका छन् । यो अर्को हौसला र प्रेरणाको बिषय हो। हुनत म पनि एक आम नेपाली नागरिक हुॅ । यसभन्दा अघि मैले त्यति चासो दिएर अमेरिकन आईडल यसरी हेरेको पनि थिइन । तर जब एक नेपाली ठिटोले पाईला राखेको थाह पाएपछि मेरो मात्र नभएर सबैको एकाएक चासो बढेको हो । यो बढ्नु पनि स्वाभाविक नै थियो र हो । यसभन्दा अघि इन्डियन आइडलमा नेपाली मुलका प्रशान्त तामाड्गले पनि सफलता हॉसिल गरेका थिए तर इण्डियन आइडल र अमेरिकी आइडलमा चाहि धेरै भिन्नता छ । पहिलो कुरा त ॲग्रेजीमा नेपाली ठिटोले यो स्तरको गीत गाउनु नै धेरै ठूलो कुरा र गर्वको बिषय हो र थियो ।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने उत्कृष्ट पॉचमा पुग्नेहरूले पनि धेरैले अमेरिकामा राम्रो गरिराखेका छन् । आफूलाई स्थापित गराईराखेका छन् । तसर्थ यसरी नै मेहनत गर्दै गए भने दिवेशको पनि भविष्य अमेरिकामा उज्वल छ । सफल छ । आगामी दिनमा उनले अमेरिकामा आफुलाई सहजै स्थापित गर्न सक्छन् । अब अर्को कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अन्तिम क्षणमा हामी कहॉ र किन चुक्यौ ? चुक्नका कारणहरू के के हुन् ? अमेरिकाभरी भएका यतिका संघ संस्थाहरूले भोट गर्न किन चासो देखाएनन् ? सक्रिय किन भएनन् ? एक हुन किन सकेनन् ? के कोरोना नै प्रमुख कारण थियो त ? दिवेशले राम्रो प्रस्तुति दिँदादिदै पनि मलाई लाग्छ हाम्रो कमजोर भोटिड्गको कारण उनी दोस्रो बन्न पुगे । तसर्थ सबैले अर्को पल्ट बिशेष ध्यान दिन र एक हुन पनि जरुरी छ । यस्तो बिषय आफ्नो एकल प्रयास र प्रतिभाले मात्र सफल हुने बिषय होइन । सबैको साथ, सहयोग, सदभाव र उत्प्रेरणा पनि चाहिन्छ ।
यसमा हामी सफल हुनसकेको भए संसारभर अर्को राम्रो सन्देश जाने थियो । नेपालीहरू यस्तो महाब्याधिको समयमा पनि एकजुट रहेछन् भन्ने नजिर स्थापित हुने थियो । बिभिन्न टुक्रामा टुक्रिरहेको अमेरिकी नेपाली समुदायलाई एकजुट बन्ने अवसर पनि थियो । तर दुःखको कुरा यसपल्ट यस हामी यस बिषयमा एक हुन सकेनौ । सायद महामारिको कारणले पनि हुन सक्छ । अर्को बिषय हाम्रो समाजले डाक्टर, इन्जिनियर्स, वैज्ञानिक र पैसा भए मात्र चासो दिने र अरू बिषयलाई चासो नदिने मनोविज्ञान छ । यो निक्कै दुःखद् र गम्भिर कुरा हो । कलाकार, गायक पनि देश र समाजका गहना हुन भन्ने कुरा हामीले आत्मबाटै नै स्विकार र सम्मान गर्न जरुरी छ । हाम्रो संक्रिण सोचाई र मनलाई फराकिलो नबनाई प्रबासको यस भूमीमा हाम्रो समुदायले आस गरेर अनुसारको सफलता हॉसिल गर्न गाह्रो छ । तसर्थ भविष्य हाम्रो समुदाय भित्र दिवेश जस्ता प्रतिभाहरू अगाडी आइरहे भने नेपाल, अमेरिकी नेपाली समाज र सम्पूर्ण अमेरिकावासीमा गर्वको बिषय हो ।